Voasazy avokoa na ny mpamily na ny tompon'ny fiara, hatramin'ny koperativa. Fampiatoana tsy miasa 3 hatramin'ny 10 andro no nampiharina tamin’ny mpamily sy tompona fiara 33, ary mihantona tsy mahazo mikarakara na manavao taratasy ara-panjakana (licences, autorisation spéciale) mandritra ny 10 andro ny Koperativa voakasik'izany. Fampiatoana tsy miasa mandritra 30 andro no sazin'ny tompona fiara iray ka vokatr'io dia mihantona mandritra ny 30 andro koa ny fikarakarana sy fanavaozana taratasy ara-panjakana ho an'ny koperativa voakasika. Fandrarana tsy mahazo mitondra fiara fitaterana intsony kosa no sazin'ilay mpamily iray nitondra io fiara io.
Mahatratra 20 no tsy tonga nefa nantsoina ka dia henjehina izy ireny ary homena ny sazy henjana noho ny tsy firaharahiana ny rafi-pandaminana ezahana apetraka ho fanatsarana. Efa tafatsangana moa ny komisiona ifarimbonan'ny minisiteran'ny fitaterana, ny ATT, ireo kaominina, ny zandary sy polisy, ireo koperativa ary ny solontenan'ny mpanjifa, ka tato anatin'ny roa volana izao, dia maro ireo dingana narahana sy lamina tsy maintsy napetraka mba hahazoana vokatra tsara sy maharitra. Manamafy ny avy ao amin’ny kaominin’Ivato fa tsy maintsy mitohy ny ezaka mba hametrahana ny zotra D ho fitaratra amin’ny fanajana ny lalàna.